Ọdịnaya, Njikọ na Keyword Strategies maka 2016 SEO | Martech Zone
Ọdịnaya, Njikọ na Keyword Strategies maka 2016 SEO
Bọchị Sọnde, Machị 13, 2016 Bọchị Sọnde, Machị 13, 2016 Douglas Karr
Aga m eme ihe n'eziokwu na n'ihu anyị na-enweta site na mgbanwe algorithm nke afọ ole na ole gara aga, obere ka m na-ele search engine njikarịcha ngwaọrụ na ọrụ dị oke ọnụ ahịa dị ka ha dịbu. Emegharịla nke ahụ na mkpa SEO. Nchọpụta ihe dị ndụ ka bụ atụmatụ dị oke mma ma dịkwa ọnụ ala maka inweta ndị ọbịa ọhụụ. Nsogbu m abụghị n’ebe ndị na-ajụ ndị mmụọ ase; ọ bụ na ngwaọrụ na ndị ọkachamara nọ ebe ahụ ka na-agbanye usoro sitere na afọ ole na ole gara aga nke na-anaghị arụ ọrụ ọzọ.
Ma a bịa na ụlọ ọrụ, aga m ahapụ ịhapụ ụlọ ọrụ SEO n'ọnọdụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọdịnaya nke ghọtara SEO. Ọ bụ naanị m chere, ma ihe gị n'ụlọnga nke ahụ na-aghọta akara na izi ozi, nkwalite ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ mgbasa ozi, njikarịcha ntụgharị, na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi (gụnyere ọrụ akwụ ụgwọ, nke nwere, ịkwụ ụgwọ yana nkekọrịta) nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa mana ọ ga-eme ka nsonaazụ kacha mma.
Nke a apụtaghị na ụlọ ọrụ ọchụchọ niile amataghị mgbanwe mgbanwe ahụ mere. Ihe omuma a sitere na Dilate, Top 6 Atụmatụ SEO kachasị ike kachasị mma 2016 na Atụmatụ na Ngwaọrụ, na-akọwa ọtụtụ atụmatụ ndị ahụ.
The Infographic na-ekpuchi isi SEO ihe iji tụlee na 2016, nke gụnyere nyocha isiokwu, SEO na peeji, SEO zuru ezu, saịtị enyi na enyi, njikọ njikọ 2016, ahịa ọdịnaya, & SEO SEO. Enwekwara ụfọdụ ntụzi aka na njedebe iji gosi gị nke ndọtị Chrome na blọọgụ akụkọ nwere ike ịbara gị uru na mbọ SEO gị.
Ọ bụrụ na m ga-achịkọta ihe na-aga n'ihu na-eweta nsonaazụ dị ịtụnanya na ndị ahịa anyị, m ga-edepụta atụmatụ ndị Dilate na-eji, mana m ga-agbanwe etu esi etinye nke ọ bụla na ihe kpatara ya:
Keyword Research - Inyocha ma ika atụmatụ na asịwo onye nnyocha, na-emepe saịtị ụtụ ụtụ na Ọbá akwụkwọ ọdịnaya dị oke egwu.
Na peeji nke SEO - mgbe ihe nke na SEO dị oke egwu, M ga-etinyekwu anya na ndị asọmpi na-emeri ọchụchọ na ibe gị. Peeji zuru ezu nke nwere isiokwu, isi okwu, ndepụta edetu, onyonyo, eserese, eserese, vidiyo na infographics ga-emeri mgbe ha na-enye karịa ndị asọmpi gị.
Mobile-Enyi na Enyi na saịtị - ọzọ, ka anyị mee nke a n'ihu. Ewezuga iwu ụlọ anabata web saịtị, ịghọta otu esi etinye teknụzụ ọhụrụ dịka Peeji ngwangwa osooso ga-adị oke mkpa. Ghara ikwu Facebook ngwa ngwa ederede na Newsdị Apple News.
Owuwu Njikọ - Na na. Akpọrọ m okwu ahụ asị ma echeghị na ọ bụ maka ọdịmma gị kachasị mma. Ọ ga-akara m mma ịrụ ikike ọchịchị ma ọ bụ njikọ-ịkpata. Ohere inweta mgbasa ozi enwetara site na mmekọrịta ọhaneze agaghị enye naanị ọkwa dị elu, mana enwere ike iji ha mee ka ndị na-ege ntị ziri ezi. Kwụsị ịchọ ebe ị ga-ejikọ njikọ wee malite ịchọ saịtị na ndị na - eme ihe ike ga - eme ka iru gị, mmata na ikike na ụlọ ọrụ gị.
content Marketing - Mmepe a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nke na-enye ndị na-ege gị ntị uru, ndị obodo gị na-ekerịta, ndị ọgbọ gị makwaara gị dị ka ọdịnaya nwere ikike bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ndị ọbịa.
Mobile ekwentị SEO - Ọrụ Geographic na-arụ nnukwu ọrụ na njikarịcha nchọta mpaghara ma kwesiri ịme ndepụta a. Google na-elebara anya ebe onye ọrụ ọchụchọ dị, ọ bụghị naanị ihe ha na-achọ. Nchọgharị mkpanaka na Indianapolis agaghị arụpụta otu ihe na San Francisco (ọ kwesịghị).
Nye Infographic ihe odide
Echere m ọsọ kwesiri ibu ihe kachasi elu n'ime ihe omuma a dika amaghi m na ihe obula nwere otutu ihe diri ogo, omume onye oru, na ntughari. Saịtị ngwa ngwa dị oke egwu - yabụ image mkpakọ, netwọk nnyefe ọdịnaya na ngwa ngwa ụsụụ ndị agha ihe niile!
Tags: 2016cdnnetwọk nnyefe ọdịnayacontent Marketingngwa ngwa mbaimage mkpakọkeywrod nyochanjikọ-ụlọInfographics Ahịamkpanaka seosaịtị mkpanaaka-mobilena peeji nke seonyocha ọchụchọihu peejianabata web designAseo ọchandụmọdụ Atụmatụseo ngwaọrụọsọ ọsọ
Dịka i kwuru, mmadụ ga-etinyekwu uche na igwe seo.